OFX South America Evolution FSX & P3D 3 afọ 3 ọnwa gara aga #559
Ndewo, unu niile,
Enweela ụgwọ ego Jumbo iji budata "OFX South America Evolution FSX & P3D"Enwere m nsogbu ihe kpatara na Antivirus m na - ewelite nchepụta nje ma ghara ikwe ka m mepee faịlụ exe.
Avast na-akọ Win32: EVO-GEN
Onye ọ bụla mara ma ọ bụ ezigbo nje?
OFX South America Evolution FSX & P3D 3 afọ 3 ọnwa gara aga #560
Ee, ọ bụ avast bụ adlck. Ọ bụ ya mere m ji kwụsị iji ya. Ọtụtụ ọtụtụ ụgha. Ejiwo m rikoooo mee ihe maka oge ụfọdụ ma nwetụbeghị otu nje.
ị dị mma ịga
Ọ dịghị ihe ga-echegbu onwe gị
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: Ace9
OFX South America Evolution FSX & P3D 3 afọ 3 ọnwa gara aga #562
Ụgha ụgha na ebe nile lol ...
OFX South America Evolution FSX & P3D 3 afọ 3 ọnwa gara aga #566
Enwetara m ya wee gaa Stanley (Falklands) ọ bụ otu ihe ahụ dịka FTX isi, achọpụtara m na config na OFX South America bụ n'elu ndepụta kachasị mkpa na Ushuaia Airport n'elu ya. Enwere ihe m na-efu na n'elu usoro nhazi inste, dịka ntọala OFX?
Oge ike page: 0.354 sekọnd